"Waxa Aan Xusuustay Kicintii Dadweyne Ee Kelitalintii Siyaad Barre"
Thursday May 12, 2022 - 09:47:23 in Articles by Hadhwanaag News
Qoraalkan waxa qorey Aqoonyahan Rashiid Sheekh Cabdillaahi (Gadhweyne)
"#Waa_iga_su’aale maxaa keenay ee looga jeedaa heeshan Alalag alalag alalag!!! Sacab sacab iyo mashxarad!!!."
"#Xaggeese laga keenay xaawalayda gudaha golaha fadhida ee ka dhacay mashxaradaysa? Maxaa se loo gu baahday"
#Sannadku waa 2022; waxa se la ii raray oo la i geeyey 70aadkii iyo 80aadkii Alalag alalag alalag!!! Sacab sacab iyo mashxarad!!!"
"#Warfaafin hagaasan oo gudbisa; si madaxbannaan oo dhexdhexaad ah u faallaysa iyo aqoonyahan lafaguraana ma jiraan"
Warfaafin hagaasan oo gudbisa; si madaxbannaan oo dhexdhexaad ah u faallaysa iyo aqoonyahan lafaguraana ma jiraan.